VSO ConvertX to DVD ~ မျိုးကို
09:22 Burning Tool, Software No comments
ညီလေး ဖြိုးဇော် G Talk မှာမေးခဲ့တာလေးကို ဒီ ၀ဲ လေးကို သုံးကြည့်ဖို့ Recommend လုပ်ချင်ပါတယ် သုံးကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ.
ကျွန်တော်တို့ Nero Burning နဲ့ DVD တွေ ပြန်ကူးတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်တာက ကွန်ပျူတာမှာ တော့ ဖွင့်လို့ ရပေမယ့် Format တစ်ချို့ရဲ့ ပြသာနာ ကြောင့် Standalone VCD ၊ DVD တွေမှာ ကျတော့ Burn လိုက်တဲ့ CD တွေက ပြန်ဖွင့် မရတာပါ။ ကျွန်တော် ဘာသာ မလုပ်တက်တာကို ပြောတာပါ...တိန် အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ ၀ဲလေးက တော့ VSO Convert X to DVD လေးပါ။ ဒါလေး က အရမ်းကို ရိုးရှင်းပါတယ် Format အတော် များများ ကို ပြောင်းနိူင်ပါတယ်။သူပြောင်းနိုင်တာ တွေက
Input Format တွေကတော့
3.Digital Video Recording
5.High Definition Video
8.MPEG-4 / QuickTime
10.Ogg Vorbis / Theora
11.Real Media (with external DLL)
15.Free Lossless Audio Codec
20.Ogg Vorbis / Theora
21.Real Media / Real Audio
SUBTITLES Internal and external subtitles supported: with color and font selection, and supports tags like italic, bold. Turn on/off with DVD player remote control.
- DVD Subtitles
• DVD standard
Compatible with any DVD player composed of:
Audio_TS folder (always empty)
Video_TS folders (with BUP, IFO, VOB files)
• AC-3, 5.1 channels
• AC-32channels
• MPEG, stereo
• DVDsub (activate in menu or with remote control)
• Full D1, Broadcast D1, Half D1 and SIF Resolutions
• DVD +/- R
• DVD +/- DL
• ISO output available, create image on harddrive
*ConvertXtoDVD includesaburning engine and can burn to any type of DVD. Recommended quality brands, are Sony, Verbatim, Taiyo Yuden.
သူရဲ့ ဒိလို Interface လေးထဲကို Video File တွေကို Drag and Drop လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ ပြီးတာ နဲ့ Convert နှိပ်လိုက်ရုံပါ။ Video လေးကို ပါ Preview ကြည့်နေလို့ ရပါသေးတယ်။ အဓိကတော့ သူက Standalone DVD Player တွေမှာ Compatible ဖြစ်စေဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ File တွေကို သူ့ဘာသာ ပြောင်းသွားပေးပါတယ်။ ပီးတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် စက်ထဲကို အခွေထည့်ထားပေးရုံပါ။ ပြောင်းပီးတာနဲ့ Burn ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါ ပုံထွက်လည်း အရမ်းကောင်းလို့ အကြိုက်တွေ့စေပါတယ် ...Full Version လေးသုံးနိုင်ဖို့ Key လေးပါ ပါပါတယ်။
DVD Burning တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လေ့လာလို့ ရမယ့် ဒီဆိုက်ကလေး ကိုလည်း လမ်းညွန် လိုက်ပါတယ်.ကို်ယ်သိချင်တာကို ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင်ပီး သူက ၀ဲလေးတွေကို ပါ Recommend လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကောင်းပါတယ်။